Ụlọ - Egwuregwu PC kacha mma n'efu
Egwuregwu PC kacha mma n'efu
Robux efu enweghị ihe nrụpụta nkwenye 2022 - Roblox
Ọkụ dayamọnd ọkụ efu 2022 sitere na garena
Ibe Facebook mepere na windo ohuruIbe Twitter meghere na windo ọhụrụ
Na post a, m ga-agbalị ịkọwa otu esi enweta robux n'efu na-enweghị nkwenye. Dị ka…
Resident Evil 3 Nemesis: a ga-ewepụta mmegharị egwuregwu na Eprel 3, 2020!
Egwuregwu PC April 1, 2022
Mweghachi nke Resident Evil 3: Mwepụta Nemesis bụ naanị maka Eprel 2020 mana nhazi PC bụ…
Ọnụma Ọbara: Nbudata dijitalụ kacha mma - ụdị zuru oke
Ọnụma Ọbara: Digital Edition bụ atụmatụ egwuregwu pụrụ iche nke ị ga-ebuso ndị agbụrụ Viking ndị ọzọ ọgụ, lanarị,…
Bibie mmadụ niile! Egwuregwu nbudata efu – ụdị zuru oke
Bibie mmadụ niile! - Nke a bụ mmegharị nke otu egwuregwu ama ama n'oge gara aga, kpochapụwo…
Oku nke oru: agha nke oge a ka aghagharia
Egwuregwu PC March 18, 2022
Oku ọrụ emelitere: Mgbasa ozi Warfare 2 nke ọgbara ọhụrụ ga-enye eserese edegharịrị kpamkpam yana textures, animation, physics…
Egwuregwu 12 kacha mma ị ga-egwu na PC na Mac ị ga-enwe ọ enjoyụ na-emefughị ​​otu mkpụrụ ego
Egwuregwu PC, Nyocha, Top Games March 17, 2022
N'agbanyeghị nkwalite mgbe niile na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche, igwu egwuregwu vidiyo na PC dị oke ọnụ. Anyị nwere ngwọta…
Otu esi ebudata vidiyo YouTube n'efu
Movierulz Raya na Dragọn Ikpeazụ (2021)
Egwuregwu Apex Legends Play Battle Royale Game 2020: atụmatụ ọhụrụ nwere ike ịpụta na Legends Apex
Posts ndị egosipụtara
Ọkụ efu Garena - Ngwá Ọrụ Generator diamond na ụzọ 7 ndị ọzọ iji…
generatorsBy Margaret Caffrey April 8, 2022 Hapụ ikwu
Na post a, m ga-agbalị ịkọwa otu esi enweta robux n'efu na-enweghị nkwenye. Dị ka Minecraft, Roblox enwetala aha ọma dị ka egwuregwu ọtụtụ egwuregwu na-enye ma ụmụaka ma ndị na-eto eto ahụmahụ pụrụ iche. Mana mgbe ahụ, nke a abụghị naanị egwuregwu nkịtị, kamakwa ohere maka ndị mmepe amateur…
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey April 1, 2022 Hapụ ikwu
Mweghachi nke Resident Evil 3: Mwepụta Nemesis bụ naanị maka Eprel 2020 mana nhazi PC adịlarị. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụrụ na ị nwere ike ịgba ọsọ RE2, ị nwekwara ike ịgba ọsọ ya nke ọma. Mkpọsa ahụ agafeela ogologo oge, ọkachasị mgbe e bipụtachara ihe onyonyo a na-ebipụtaghị, mana nhazi usoro na-abụkarị…
Ọnụma Ọbara: Digital Edition bụ atụmatụ egwuregwu pụrụ iche nke ị ga-ebuso ndị agbụrụ Viking ndị ọzọ ọgụ, dị ndụ, nweta otuto nke ndị chi na-ahụbeghị, wee gbalịa ịbanye Valhalla tupu Ragnarok emee… Ụbọchị: Mee 27, 2020 Ụdị: Onye Mmepụta Strategy: Exozet Platform: PC Interface Language: English, Multi5…
Ebibie mmadụ niile! - Nke a bụ mmegharị nke otu egwuregwu ama ama n'oge gara aga, ihe nkiri kpochapụwo nke ị na-akwado ndị ọbịa ọjọọ wee malite ibibi ndị mmadụ na mmepeanya ha niile na-esighi ike… Ụbọchị mwepụta: Julaị 28, 2020 Genre: Action , Adventure, Ụwa mepere emepe, Onye Mmepụta nke atọ: Egwuregwu ọhịa ojii,…
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey March 18, 2022 Hapụ ikwu
Oku ọrụ emelitere: Mgbasa ozi Warfare 2 nke ọgbara ọhụrụ ga-enye eserese edezigharịrị kpamkpam yana textures dị mma, ihe ngosi, nhazi physics, ọkụ HDR, na ọtụtụ ndị ọzọ. Oku nke ọrụ: Mgbasa ozi agha 2 ọgbara ọhụrụ ga-eri € 24.99. Ọ ga-agụnye Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle maka oku ọrụ: agha ọgbara ọhụrụ na oku nke…
Egwuregwu PCNyochaTop Games
Egwuregwu PC, Nyocha, Top GamesBy Margaret Caffrey March 17, 2022 Hapụ ikwu
N'agbanyeghị nkwalite mgbe niile na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche, igwu egwuregwu vidiyo na PC dị oke ọnụ. Anyị nwere ihe ngwọta maka gị: kpọọ ọmarịcha egwuregwu egwuregwu efu n'efu. Ma atụla ụjọ, n'oké ọhịa a nke aha: anyị ekewapụla ọka na igbogbo ọka. Summer na-akụ aka n'ọnụ ụzọ anyị, ma ọ bụ na laptọọpụ ka…
Death Stranding Game nke afọ na PS4
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey March 17, 2022 Hapụ ikwu
Ihe okike ohuru nke Hideo Kojima na ndi otu ya bu echiche siri ike ichikota. Egwuregwu ọnwụ na-eju anya, na-abụkarị n'ụzọ dị mma, na-etinyekwa ihe egwu. Ka ị na-anọgide na-egwu egwu, ọ kachasị akụkọ ihe mere eme na ịnọrọ onwe ya na-azụ. Ajọ omume ebe a doro anya: wepụ onye ọkpụkpọ ahụ ...
generatorsBy Margaret Caffrey March 12, 2022 Hapụ ikwu
Garena Free Fire – Diamonds Generator Tool na 7 ụzọ ndị ọzọ iji nweta diamond Enweghị obi abụọ ọ bụla banyere ya – Garena emepụtala otu n'ime ndị kasị eri mobile egwuregwu si n'ebe. Dị maka ma sistemụ iOS na gam akporo, ikpo okwu ọkụ n'efu nwere egwuregwu egwuregwu pụrụ iche na mkpụrụedemede pụrụ iche na-eme ka ọ pụta ìhè.…
Egwuregwu nbudata efu efu - ụdị zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey March 8, 2022 Hapụ ikwu
Ihe egwu Scavenger na ụdị nke cyberpunk ga-akọ akụkọ ya. Ndị ode akwụkwọ na-atụ aro ka ị sonyere otu ndị a gwọrọ, akpọrọ Scavengers. Ị ga-eche ihu ọgụgụ isi siri ike na enweghị mkpụrụ obi. Ọgụ ahụ ga-adị egwu ma jupụta na mmetụta dị iche iche na-adọrọ mmasị. Ị nwere ike igwu egwu ọ bụghị naanị n'onwe gị kamakwa site na ịkpọ enyi gị site na iji…
N'ofe: Mkpụrụ obi Abụọ Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
N'ofe: Mkpụrụ obi abụọ bụ onye nnọchi anya doro anya nke ụdị egwuregwu dị ụkọ. Nke a abụghị naanị egwuregwu, ọ bụ mkparịta ụka sci-fi nwere nkata na-atọ ụtọ yana agwa na-atọ ụtọ. Ụbọchị mwepụta: Julaị 22, 2019 Ụdị: Action, Adventure, Platform 3rd Person: PC Interface Language: English, Multi23 Akụkọ ahụ na-akọ gbasara nwa agbọghọ Jody Holmes…
Centralia: ụdị nke na-abịa n'ụlọ
Centralia: Ịbịa n'ụlọ bụ egwuregwu egwu mmadụ mbụ nke ị ga-adị ndụ n'ọnọdụ kachasị njọ, nnukwu anụ mmiri, ihe omimi na ihe omimi, yana akụkọ akụkọ bara ụba nke ukwuu… Omume egwuregwu a na-ewere ọnọdụ n'obodo a na-akpọ Centralia, ebe egwu dịbu. Ihe ọjọọ si n’ime ụwa bata wee malite ibibi ihe niile dị n’ụzọ ya. Ọtụtụ mgbe, na…
Steel Division 2 Egwuregwu nbudata efu – ụdị zuru oke
Steel Division 2 bụ ezigbo oge WWII atụmatụ na-ewere ọnọdụ na Eastern Front. Ọ gụnyere ntugharị nke ndị agha na-atụgharị na 1: 1 na ọgụ ọgụ ozugbo, ebe puku kwuru puku ndị agha ga-anọ n'okpuru iwu gị. Gwuo dị ka onye izugbe na mkpọsa atụmatụ siri ike nke nha 1: 1, dị ka onye ọchịagha…
Egwuregwu Budata anụ ọhịa efu - ụdị zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey February 17, 2022 Hapụ ikwu
Jiri nkà were nnukwu wiil kwọọ gwongworo gị dị ike. Categories: Oke faịlụ nha: 105.5 Mb Download Egwuregwu Nkọwapụta Egwuregwu atọ egwuregwu atọ gbasara gwongworo anụ ọhịa - Ara anụ nnukwu ụgbọ ala, Safari nnukwu anụ mmiri na egwuregwu Ultra Monster Truck Free Download Egwuregwu - ụdị zuru oke. Asọsọ megide ndị mmegide gị yana n'okporo ụzọ mgbochi siri ike. Egwuregwu ịgba ọsọ, savanahs,…
Ukwu zuru akpaaka 2 Free Download Full – Version
Grand Theft Auto 2 bụ ihe na-aga n'ihu nke usoro a, ha niile na akụkụ abụọ. Emeziwanye eserese na injin. GTA II, yabụ ị nwere ike itinye aka na mmebi iwu juru ebe niile. Ndị na-ede akwụkwọ maara nke ọma ihe ndị na-egwu egwuregwu chọrọ, ha mere mgbanwe na-eburu n'uche ihe ndị a chọrọ n'oge na nchọpụta nke onwe ha. Enwere…
Egwuregwu nbudata efu nke HyperParasite – ụdị zuru oke
HyperParasite bụ egwuregwu n'ụdị nke ejima-stick shooter na roquelike, ebe akụkụ ọ bụla pụrụ iche. Jikwaa mkpụrụedemede 60 n'ọrụ nke nje parasaiti ala ọzọ na-emegide. Mee ụzọ gị n'elu eriri nri: jide onyeisi oche, pịa nnukwu bọtịnụ uhie, ma merie ndị iro. Nbudata HyperParasite. Ụbọchị mwepụta: Eprel 3, 2020…
Ary na nzuzo nke oge egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Igwe ikpo okwu 3D Ary na Nzuzo nke Oge na-enye usoro njikwa na-adọrọ mmasị maka oge mana o yighị ka ọ nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye karịa ya. Gụkwuo na nyocha. Onye nrụpụta: eXiin, Onye na-ebipụta Cactus Fishing: Egwuregwu Modus Mwepụta: Septemba 1, 2020 Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Ariel bụ ada nke onye nlekọta…
Mpaghara isi awọ [v 1.0 nweta mmalite] (2020) PC
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey February 9, 2022 Hapụ ikwu
Egwuregwu nbudata n'efu mpaghara Grey Mpaghara zuru oke - onye na-agba ụta RTS nwere ihe RPG. Nke a bụ ihe na-adịghị mma nke ohu nke nupụụrụ nna ya ukwu isi n’oge dị anya. Ị na-eche ihe odide agaghị echefu echefu, mkparịta ụka na-atọ ọchị na ọtụtụ ihe omume! Ụdị: Strategy (RTS), RPG Onye Mmepụta: Eastworks Onye mbipụta: Eastworks Platform: PC mbipụta ụdị: Ụdị ikike: v…
Elvenar – egwuregwu ịntanetị na usoro ntụgharị dabere
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu atụmatụ, yabụ egwuregwu Elvenar bụ ebe maka gị. Mbụ, ọ bụ n'efu, egwuregwu ịntanetị a nwere ike ịgba ọsọ na ihe nchọgharị ọ bụla. N'ime ya, ị nwere ike itinye aka n'iwu obodo ahụ wee rụchaa ọrụ nwayọ iji wakpo ndị iro na ọnọdụ HOMM. Maka agwa…
Egwuregwu Ndị ọgọ mmụọ n'ịntanetị - ụdị zuru oke
Pagan Online bụ egwuregwu isometric RPG nke na-ewere ọnọdụ n'ime ụwa echiche efu sitere na akụkọ ifo ndị Kraịst tupu oge Ndị Kraịst, nke Wargaming bipụtara (nke ụwa nke tankị mara). Enwere ike ịkpọ Pagan Online naanị ya na netwọkụ, mana nke mbụ, ị ga-ebudata iyi iyi n'ịntanetị na kọmputa gị dịka ịchọrọ. Ụbọchị mwepụta: 2019 afọ GENRE:…
Goosebumps nwụrụ anwụ nke abalị nbudata egwuregwu efu – ụdị zuru oke
Goosebumps nwụrụ n'abalị maka ndị na-agụ akụkọ na-atụ egwu. Egwuregwu ahụ dabere na usoro akụkọ "egwu". Gagharịa na isiakwụkwọ niile, juputara na mmemme na agwa mara mma. Ọchịchọ ọgụgụ isi na-achịkwa nnukwu anụ na ndị mmegide niile a ga-eche ihu. Ma ọ gaghị adabara gị, nwee obi ike. Ọ dị mma ịmara ụdị ọmarịcha nke…
Igbu mmadụ na New York Download PC egwuregwu n'efu
Na-arụ ọrụ na ọnọdụ mpụ wee kpughee ihe nzuzo! Igbu mmadụ na New York Download PC Game free igbu ọchụ na New York Free Download – PC Games Review Mezue nyocha! Jide onye omekome ahụ n'egwuregwu ihe nzuzo a na-atọ ụtọ ma na-eri ahụ! Soro ndị nchọpụta Turino na Lamont ndị ebufegoro na ngalaba nyocha pụrụiche!…
Grim Soul: Ọchịchịrị Ọchịchịrị Ọhụụ
Mkpụrụ obi Grim: Ịlanahụ Fantasy gbara ọchịchịrị bụ egwuregwu ọtụtụ mmadụ nke ịchọrọ ịmanye agwa gị wee nyochaa ụwa mepere emepe jupụtara nnukwu anụ, ndị isi na ndị egwuregwu na-emegide. A na-eme ebe, ihe na ihe ndị e kere eke n'ụdị echiche efu gbara ọchịchịrị. Mkpụrụ obi Grim: Ịlanahụ Fantasy gbara ọchịchịrị maka gam akporo na-enye gị ohere ịmụta ọrụ ma wuo nke gị…
Little Reaper (2020) Egwuregwu nbudata PC efu - ụdị zuru oke
Banye, lụọ ọgụ, wee ghọọ ụzọ gị site na mpaghara omimi nke Little Reaper dị ka Ollie, obere onye enyemaka Grim Reaper na ikpo okwu egwuregwu a mara mma nke Little Reaper. Ollie nọgidere na-elekọta Ụlọ Ọnwụ, ebe Grim mere ezumike kwesịrị ekwesị. Ụbọchị mwepụta: Julaị 20, 2020 Ụdị: Arcade, Platformer, Adventure, Indie Developer: Little Reaper Games Printer:…
Succubus: Emechara kwupụta egwuregwu a. Na-atụ anya 2021/2022!
Egwuregwu ọhụrụBy Margaret Caffrey February 9, 2022 Hapụ ikwu
Succubus bụ egwuregwu dị egwu nke bụ ezigbo simulator nlanarị. Ị ga-egwu egwu dị ka dike mmụọ ọjọọ mara mma, mara na akụkọ ifo dị ka succubus. Ị ga-adaba n'ime ụwa echiche efu nke hel, ebe, n'agbanyeghị na ọ dị ịtụnanya, enwere ndị na-enweghị afọ ojuju n'ụdị ihe dị. Ụbọchị mwepụta:…
Egwuregwu nbudata PC efu (2020) - ụdị zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey February 3, 2022 Hapụ ikwu
Deck of Ashes bụ egwuregwu na-akpali akpali nke nwere ọgụ kaadị aghụghọ. Otu mgbe, duo otu ndị dike na-emegide ndị dike n'ụzọ nke mgbapụta. Chọgharịa ụwa echiche efu ma na-anakọta kaadị n'ọgbọ agha pụrụ iche. Nwalee ike gị ịlanarị ma jikwaa akụrụngwa ka ị na-emeziwanye ogige ndị mmekọ. Ụbọchị mwepụta n'elu ntụ ntụ: June 9,…
Electro Ride: Neon Racing Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Electro Ride: Neon Racing - ụgbọ ala neon na-agba ọsọ sitere na Bloc East mbụ. Na Europe ọzọ, ebe mpaghara ọwụwa anyanwụ na-adaghị ma ghọọ ebe etiti akụ na ụba na ọganihu ebighị ebi, nke a bụ ebe a ma ama na-echere gị. Ụbọchị mwepụta Electro Ride: Julaị 10, 2020 Ụdị: Platform Racing: PC Interface Language: English, Multi8 Description:…
Otu Iberibe: Ndị PIrate WARRIORS 4
Otu Piece Pirate Warriors 4 bụ akụkọ igbu mmadụ nke atọ nke ị nwere ike imikpu onwe gị na njem ọhụrụ nke otu nwoke aha ya bụ Luffy na ndị otu ya nke ndị ohi… Ụbọchị mwepụta: Machị 27, 2020 Genre: Action, Fighting, Anime Mmepụta: Koei Onye nkwusa Tecmo: BANDAI NAMCO Entertainment Platform: PC Interface Language: English, Multi13 Asụsụ olu: Nkọwa Japanese: The…
Ụdị Sims 4 dijitalụ deluxe egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Onye ọ bụla maara banyere egwuregwu a. Ụwa niile nọ na-eche maka mwepụta nke ụdị simulator kpara emelitere emelitere. Ma ugbu a, ụbọchị abịawo. Mbipụta Deluxe dijitalụ Sims 4 dị ugbu a maka onye ọkpụkpọ ọ bụla chọrọ iwulite ezigbo ndụ ha na eziokwu mebere. Ndị mmepe ahụ nwere ike ime ya ka…
Ihe nketa anwụghị anwụ: Jade Cipher
Ihe nketa anwụghị anwụ: Jade Cipher bụ ngwakọta egwu egwu na nlanarị, egwuregwu ime ihe egwuregwu nwere echiche mmadụ mbụ, yana ihe nkiri eme. N'ebe a, ị ga-ahụ imikpu n'ime ụwa akụkọ ifo na akụkọ ifo ndị China, ihe egwu na ọtụtụ ndị ọzọ… Ụbọchị mwepụta anwụghị anwụ: Mee 21, 2020 Genre: Action, Onye mbipụta akwụkwọ mbụ: Viva Games Platform:…
Jewel Match Solitaire 2. Mbipụta mkpokọta
Jewel Match Solitaire 2 - akụkụ nke abụọ nke egwuregwu kaadị ịgba afa ga-eduga gị ọzọ na njem dị egwu na alaeze nke Middle Ages na nnukwu ụlọ ya. Nyochaa ọtụtụ ụdị solitaire kpochapụwo, na-emeri ihe mgbochi siri ike na kaadị oyi kpọnwụrụ na nke egbochiri, jiri ego dị egwu karịa ọkwa narị atọ na…
ATOM RPG Trudograd Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
ATOM RPG Trudograd (ATOM RPG Trudograd) bụ ntụgharị dabere na usoro egwuregwu nke ị ga-aga ụwa nke mbibi nuklia bibiri wee gbalịa ichekwa ya n'abalị nke apocalypse ọhụrụ… 11, 2020 Ụdị: RPG, Onye Mmepụta vlanahụ: AtomTeam Onye mbipụta: AtomTeam Platform: PC mbipụta mbipụta: Ụdị ikike:…
Deep Rock Galactic - onye na-agba ụta sci-fi nke mbụ nwere echiche onye mbụ maka egwuregwu nkwonkwo nke ị ga-ahụ gnomes oghere dị jụụ, gburugburu ebe obibi kpamkpam, sistemu ọgbara ọhụrụ na-emepụta usoro, yana ebili mmiri na-adịghị agwụ agwụ nke nnukwu anụ mmiri. Otu: Egwuregwu 2020 / Ndị na-agba ụta / Omume / Onye mbụ / Ụwa mepere emepe / Ụbọchị mwepụta nlanarị: Mee 13, 2020…
BULLETSTORM Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 31, 2022 Hapụ ikwu
Ịchọrọ ịkpọ onye na-agba ụta obi tara mmiri na ihe mgbagwoju anya nke akụkọ ifo na ime ihe? Iji mee nke a, naanị ị ga-achọ nbudata Bulletstorm na webụsaịtị anyị! Afọ mwepụta: 2017 Genre: 3D / 2017 / 1st Onye / Shooter / Onye Mmepụta Action: Ndị mmadụ nwere ike ifefe Asụsụ: ENG Asụsụ olu: ENG Mbadamba ụrọ: PLAZA SYSTEM REQUIREMENTS Sistemụ arụmọrụ: Windows 7/8 /…
Otu ụbọchị ị ga-alaghachi (2020) PC
Otu ụbọchị, ị ga-alọghachi bụ ọchịchọ siri ike nke nwere egwuregwu egwuregwu, nlanarị na egwu, nke ị ga-aga Czech Republic n'ọrụ Daniel, nna onye nwa ya nwanyị nwụnahụrụ… : Mee 5, 2020 Ụdị: Adventure, Horror, Onye Mmepụta nke Mbụ: CBE software Onye nkwusa: CBE software Platform:…
Eju nke egwuregwu grail emeruru
Grail Tainted bụ egwuregwu na-eme njem nke nwere ọtụtụ ụzọ aghụghọ, nyocha na ụwa mepere emepe. Ị ga-ahụ njem dị ogologo ma dị ize ndụ, nnukwu ụwa, ọtụtụ NPCs, na ọtụtụ ndị ọzọ… Isiokwu: Ụbọchị mwepụta Grail Tainted: 2020 Genre: RPG, Mepee Onye Mmepụta Ụwa: Teta Realms Digital Publisher: Teta Realms Digital Platform: PC Description: Egwuregwu…
AGHA EBE EBE EBE EBE EBE EBE EGO – ụdị zuru oke
Char D2 bụ tankị na-alụ ọgụ French nke Renault mepụtara dị ka ihe dị mfe ma dị ọnụ ala karịa Char B1. WAR THUNDER Free Download mgbe agha kpụ ọkụ n'ọnụ n'oge mbuso agha France na 1940, Char D2 n'okpuru ọkọlọtọ nke French Republic ga-abanye n'ọgbọ agha nke War Thunder…
TakeOver bụ egwuregwu ọgụ gbadoro ụkwụ na akụkọ ihe mere eme nke nwere echiche n'akụkụ, nke emere n'ụdị retro yana mgbakwunye “iti 'em elu”. N'ebe a, ị ga-ahụ ọnụọgụ agha na-enweghị atụ, atụmatụ mara mma na ọtụtụ ndị ọzọ… Isiokwu: Ụbọchị mwepụta TakeOver: November 10, 2019 Genre: Action, Fighting, Arcade Developer: Pelikan13 Publisher: Pelikan13 Platform: PC…
CONAN EXILES Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Nbudata Conan Exiles bụ egwuregwu ịlanarị mepere emepe nke dabere na akwụkwọ gbasara Conan the Barbarian. Lanarị n'ime ụwa siri ike, wuo ụlọ na alaeze gị, na-etipịa ndị iro n'ọgụ dị egwu. Afọ mwepụta: 2018 Ụdị: RPG / 3D / Onye Mmepụta Action: Funcom Asụsụ: Bekee | Sistemụ ọrụ chọrọ ọtụtụ usoro: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10…
Okenye akwụkwọ mpịakọta V: Skyrim – Mbipụta Pụrụ Iche
Akwụkwọ Mpịakọta Elder V: Skyrim Pụrụ Iche Mbipụta bụ nkwalite na gbasaa ọzọ nke mbụ The Elder Scrolls V: Skyrim, nke agbakwunyere ndị iro ọhụrụ, akụrụngwa, ọnọdụ, agwa na DLC niile. Na mgbakwunye, e degharịala Eserese Legendary Edition, agbakwunyere mmetụta ọhụrụ yana mmụba gburugburu ebe nkọwa. Ụbọchị mwepụta: Ọktoba 28, 2016 Ụdị:…
Nbudata GTA 4 nke ukwuu maka PC zuru ezu
Nbudata GTA 4 nke ukwuu maka PC na-emepe ụwa HD. Usoro isiokwu a bụ ihe atụ doro anya nke na ọganihu anaghị akwụsị. Ndị na-ede akwụkwọ na-egosi ọganihu siri ike. Otu n'ime ntọala nke akụkụ niile bụ agba agba ndị omempụ na-egbuke egbuke nke ihe ọ bụla na-eme. Onye ọkpụkpọ ahụ ga-ezu ohi ụgbọ ala, gbuo,…
Egwuregwu ịlụ ọgụ
Jump Force – BANDAI NAMCO Egwuregwu nbudata n'efu
Egwuregwu ịlụ ọgụBy Margaret Caffrey January 24, 2022 Hapụ ikwu
Nbudata JUMP Force n'efu bụ egwuregwu ọgụ nke ndị dike anime na manga ama ama nke mbara igwe dị iche iche gbakọtara: Dragọn Ball Z, Otu Piece, Naruto na ndị ọzọ. Ha jikọtara ọnụ iji zọpụta ụwa site n'ihe iyi egwu na-abịanụ. Aha: JUMP FORCE Ụbọchị mwepụta: Febụwarị 15, 2019 Ụdị: Action, Fighting, 3D Mmepụta: Spike Chunsoft Co., Ltd. Onye nkwusa:…
Egwuregwu nbudata efu EVERSPACE – ụdị zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 24, 2022 Hapụ ikwu
Everspace bụ onye na-agbapụ oghere na otu ọkpụkpọ. Ejikọtara ihe ndị yiri rogue na eserese ọgbara ọhụrụ yana akụkọ akụkọ na-adọrọ adọrọ. Ị ga-amalite njem dị ize ndụ site na mbara igwe na-agbanwe agbanwe, mara mma na jupụtara na ihe ịtụnanya. Ụbọchị mwepụta: Mee 26, 2017 Ụdị: Action, Simulation, Roguelike Mmepụta: ROCKFISH Egwuregwu Platform: PC mbipụta: Asụsụ Interface ikike: Bekee, na Multi12…
UncategorizedBy Margaret Caffrey January 24, 2022 Hapụ ikwu
Dragọn Ball Z: Kakarot bụ ngwakọta nke egwuregwu ndị Japan na-egwu egwu na slasher, egwuregwu ime ihe nke ị ga-aga na mbara igwe dragọn Ball wee bie ndụ nke Son Goku, nwoke nwere ikike karịrị nke mmadụ… Dragọn Ball Z Kakarot Olee otú. Iji nweta pel Dragon na Dragon Ball Z Kakarot, ị nwere ike ịhụ 7…
Emerald Lake Free Download egwuregwu – ụdị zuru oke
Emerald Lake bụ ogige ụmụaka dị n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ. Ọ dịla anya a gbahapụrụ ogige a n'ihi ọtụtụ ihe dị ịtụnanya mere n'oge dị anya gara aga. Enweghị ozi ọ bụla gbasara ihe kpatara eji mechie ogige ahụ ma gbahapụ ya. Onye isi agwa, Michael, gara n'ogige a ịchọta nwanne ya nwoke Peter, onye…
Egwuregwu nbudata Zomboid efu - ụdị zuru oke
Zomboid Project (Project Zomboid) raara onwe ya nye maka nlanarị nke ajọ zombies gbara ya gburugburu. Ị nwere ike itinye oge ntụrụndụ gị n'ọrụ a magburu onwe ya. Naanị ma ọ bụ, site n'enyemaka nke ọtụtụ, gị na ndị enyi jikọọ. Map buru ibu juputara na ohere dị iche iche iji gbuo oge, mejupụta ihe oriri, na ịlụso ndị nwụrụ anwụ na-asọ oyi ọgụ.…
Ndị agha Zombie 4: Agha Nwụrụ Anwụ - Super Deluxe Edition (2020) PC
Zombie Army 4: Agha Nwụrụ Anwụ Free download egwuregwu zuru oke na-enye ndị egwuregwu kacha ọbara ọbara na ọgụ dị egwu nwere ọtụtụ zombies Nazi. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka izi ezi nke akụkọ ihe mere eme, mgbe ahụ, ndị mmepe ahụ na-akwụ ụgwọ kacha nta n'oge a, na-elekwasị anya na akụkụ post-apocalyptic nke egwuregwu ahụ. Akụkụ a nwekwara ọnọdụ nkwonkwo - ruo 4…
Egwuregwu nbudata Caliber efu – ụdị zuru oke
Nbudata Caliber bụ onye na-agba ụta mmadụ nke atọ nke ịgba égbè, ọrụ dị ize ndụ, ọrụ ndị na-eyi ọha egwu, oké osimiri nke ngwa agha, na eziokwu na-enwetụbeghị ụdị ya na-echere gị… na ihe mbụ ị ga-ekwu bụ na isi ọrụ a bụ ezigbo ọkọlọtọ na dabere na ọgụ dị n'etiti ndị agha pụrụ iche, ndị ọrụ ha na-arụ…
Egwuregwu nbudata n'efu gbara ọchịchịrị - ụdị zuru oke
Ìhè gbara ọchịchịrị bụ ihe jupụtara na sci-fi omume nwere egwuregwu pụrụ iche. Ị ga-aga njem dị ize ndụ site na ụwa apocalyptic nke cyberpunk, nke ndị na-enweghị ike bi. Ụbọchị mwepụta nke Ìhè gbara ọchịchịrị: Nnweta mmalite Mee 8, 2020 Ụdị: Action, Adventure, Platformer, 2D Developer: Mirari & Co. Platform: PC mbipute: Ụdị Nnweta mmalite asụsụ:…
Nimbatus - Oghere Space Drone Constructor
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 21, 2022 Hapụ ikwu
N'ime egwuregwu a, ị bụ onye isi Nimbatus, ụlọ ọrụ ụgbọ ala kachasị ukwuu na akụkọ ntolite. Rụpụta drones gị wee nyochaa mbara igwe, ebe iwu physics niile metụtara. Nbudata Nimbatus n'efu: Iji dị ndụ, ị ga-emerịrị ụzọ gị site na mbara ala ndị nwere ike ibibi kpamkpam na biomes dị iche iche. Nweta nnwere onwe okike zuru oke na…
Blackthorn Arena egwuregwu n'efu na PC Review
Blackthorn Arena bụ simulator nke onye nwe ebe egwuregwu gladiatorial, egwuregwu nke ị nwere ike ịghọ ezigbo onye nwe ebe ahụ wee gbalịa ịkwadebe gladiators ndị ga-alụ ọgụ gburugburu ụwa wee too gị na mpaghara gị… Egwuregwu nbudata n'efu na-ewere ọnọdụ. na ókèala nke ala efu efu.…
Egwuregwu nbudata n'efu nke Minecraft Dungeons - ụdị zuru oke
Minecraft: Dungeons bụ ihe okike zuru oke nke Mojang, nke etinyela uche na akụkọ ihe mere eme nke okike ụlọ mkpọrọ maka egwuregwu kọmputa. Ihe ọhụrụ a dị maka igwu egwu na kọmputa nkeonwe, Nintendo Switch, PS4, Xbox One na Game Pass. Ụbọchị mwepụta: Mee 26, 2020 Ụdị: Action, RPG, Onye Mmepụta Adventure: Mojang Studios Platform: PC…
Nbudata egwuregwu zuru oke n'efu
Nke a bụ egwuregwu ngwa ngwa ebe ị ga-agba ọsọ ma gbaa n'akụkụ niile. Usoro ewepụtara n'usoro yana ọtụtụ ihe enweghị usoro agaghị ekwe ka ike gwụ gị! Na ihe a niile nwere ọmarịcha eserese 2D ọgbara ọhụrụ na mkpebi dị elu. nbudata iwe iwe. Ụbọchị mwepụta: Mee 8, 2020 Ụdị: Action, Shoot'em up, Platformer Developer: Awesome Games...
NyochaBy Margaret Caffrey January 21, 2022 Hapụ ikwu
Ị nwere ike ịchọrọ ikiri vidiyo ma emechaa, mana a gaghị enwe ohere ịntanetị. Ikekwe echi ma ọ bụ n'ime otu awa ga-ehichapụ vidiyo ahụ maka otu ihe ma ọ bụ ọzọ. Anyị ga-egosi gị otu esi ebudata vidiyo YouTube n'efu na ekwentị gị, mbadamba na kọmputa gị. Ụzọ kachasị mfe na ngwa ngwa iji budata vidiyo YouTube na…
Soulcalibur VI bụ ihe na-aga n'ihu nke egwuregwu ọgụ nke ndị agha na-eji ngwa ọgụ zuru oke. N'ime ya, ndị dike kachasị mma na-ebuso agha ọgụ ọzọ maka inwe mma agha a ma ama. Ihe omume na-etolite na narị afọ nke iri na isii, na-alaghachi na oge egwuregwu mbụ ma na-ekpughe nkọwa ọhụrụ nke ihe mere na ndị ...
Sniper Elite V2 eweghachitere (2019)
Sniper Elite V2 N'ime ụbọchị ọjọọ nke njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ, n'etiti mkpọmkpọ ebe nke Berlin, otu mgbọ nwere ike ịgbanwe akụkọ ihe mere eme ... Elite sniper Karl Fairburn laghachi n'ihu ahịrị na emelitere version nke a ma ama egwuregwu na nzuzo arụmọrụ. Na Sniper Elite V2You bụ onye ama ama US sniper, Carl Fairburn,…
Egwuregwu ọgụ kacha mma na PC - budata ụdị zuru oke
Egwuregwu ịlụ ọgụBy Margaret Caffrey January 21, 2022 Hapụ ikwu
N'ime ọtụtụ ụdị egwuregwu ịntanetị dị iche iche, egwuregwu ọgụ kacha mma na PC bụ nke kacha nta. Ma n'agbanyeghị na ụdị a nwere ndị hụrụ ya n'anya, ugbu a ọrụ ndị ga-abụ egwuregwu "dị ọcha" egwuregwu ịntanetị nwere ike ịgụ na mkpịsị aka. Enwere ego karịa na PC. Ị jụrụ ka nke a si metụta…
FIFA 11 (2010) Egwuregwu nbudata efu – ụdị zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 17, 2022 Hapụ ikwu
Usoro ohuru nke dribbling n'akụkụ ọ bụla na-enye njikwa zuru oke na egwuregwu ahụ. Teknụzụ ihe ngosi nke ọgbọ na-abịa na-enye ohere ka ndị egwuregwu teknụzụ nwee ike ịzọpụta ndị na-agbachitere oge gara aga site n'iji ọmarịcha cross-dribbling. Ụdị physics nke egwuregwu ahụ na-eji usoro mgbako nkukota ọhụrụ, nke na-enyere aka na-eduzi mgba dị iche iche, na-adọrọ mmasị na nke na-adịghị ahụkebe maka bọl. Site na Be…
Egwuregwu nbudata nke Stoneshard - ụdị zuru oke
Nbudata Stoneshard bụ akpa nwere mgbapụta n'efu na ụwa mepere emepe nke ị na-eche ọgụ na nnukwu anụ dị iche iche, ịchụ nta akụ, ọtụtụ ọrụ na-atọ ụtọ na ọtụtụ ndị ọzọ… : Ink Stains Games Onye mbipụta: HypeTrain Digital Platform: PC, PlayStation 6 Ụdị mbipụta: Nnweta mmalite…
Egwuregwu nbudata Temtem n'efu – ụdị zuru oke
N'ikpeazụ, ndị mmepe malitere ịṅa ntị na egwuregwu ndị na-elekwasị anya ọ bụghị nanị na egwuregwu egwuregwu kamakwa na mpaghara mmekọrịta. Taa ị ga-enwe ohere ibudata Temtem wee banye njem na-atọ ụtọ na agwaetiti niile na-ese n'elu mmiri. Nbudata Temtem n'efu agaghị eleda mpaghara a anya ebe ọ…
Onye na-eri anụ: Ebe ịchụ nta nbudata efu – ụdị zuru oke
Onye na-eri anụ: Ebe ịchụ nta bụ onye na-agba ụta ọtụtụ mmadụ asymmetric nke na-eme n'ime ime ọhịa ebe Predator na-achụ anụ kacha dị ize ndụ. Gwuo dị ka akụkụ nke otu ndị ama ama nke mmadụ anọ wee zuo oke ọgụ mgbe ị na-ezo na Predator. Ma ọ bụ were ọrụ nke Predator wee chụọ nta maka ndị tozuru oke…
Mkpụrụ obi gbara ọchịchịrị 3: Deluxe Edition Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Egwuregwu Dark Souls 3 nwere nnukwu ụwa mepere emepe. Onye isi agwa na-agagharị n'ụwa furu efu na-alụ ọgụ na ndị mmụọ ọjọọ na-agbalị ịghọta nkọcha ya na-achọ ụzọ isi na ụwa ndị a gbara ọchịchịrị. Ị na-egwu ya, ị nwere ike ịgbapụta nkà, ị nwere mma agha na anwansi n'aka gị. Ụbọchị mwepụta: Eprel…
Egwuregwu nbudata efu nke Kenshi – ụdị zuru oke
Kenshi, egwuregwu na-egwu igbe sandbox na-emebi emebi ebe ị na-emepụta akụkọ nke gị. Ndị mmadụ na-ekwukarị na ịbụ dike siri ike, ma ọ dịghị onye na-ekwu na ọ na-esiri onye nkịtị ike ikpebi ime ihe ziri ezi. Ụbọchị mwepụta n'efu Kenshi: Disemba 6, 2018 Ụdị: RPG, Simulator, Strategy, Sandbox, Mepee…
DreadOut 2 Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Nbudata n'efu DreadOut 2 bụ ihe na-aga n'ihu nke akụkụ mbụ nke egwu hardcore nwere echiche mmadụ atọ. Oge a ị ga-adị ndụ dị ka nwa agbọghọ aha ya bụ Linda n'ime nnukwu obodo, na-alụso nnukwu anụ ọgụ, na-agbanarị ihe egwu, na-eme ọtụtụ ihe… Ụbọchị mwepụta: February 21, 2020 Ụdị: Action, Sirvival Horror, 3rd Person…
ROMANCE nke alaeze atọ XIV (2020) PC
Ihụnanya nke alaeze atọ nke XIV bụ n'ihu n'usoro usoro ntụgharị na ntọala ndị China. Lụọ ọgụ maka China na mpaghara ya niile kewara n'etiti otu, nweta mmeri, wee degharịa akara aka nke Alaeze Ukwu China… Genre: Strategy, TBS Mmepụta: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Platform: PC Interface asụsụ: Bekee, Multi5 Nkọwa: Dị ka o kwesịrị,…
Egwuregwu nbudata n'efu nke Carnival - ụdị zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 14, 2022 Hapụ ikwu
Agha Carnival bụ onye na-agba ụta n'ịntanetị nke na-emebi stereotypes niile. Jiri slim, igwe okwu ma ọ bụ jiri anyụike dị nkọ buso ndị iro ọgụ! Enweghị iwu na mgbochi - jide nnukwu egbe wee gbaba n'ime anụ anụ ọbara. Afọ mwepụta nke Carnival agha: 2016 Genre: Action, MMOFPS, Shooter, Online Platform: Nkọwa PC: Onye na-agba ụta ọgbara ọhụrụ…
Huntdown (2020) Egwuregwu nbudata efu - ụdị zuru oke
Ịchu nta free download: Ịme ego na mpụ bụ siri ike … Ọ gwụla ma na, n'ezie, ị bụ a bounty dinta. Ọdịnihu dị na mbara ala. Okporo ámá jupụtara n'ime ihe ike, òtù ndị omempụ na-achị obodo ahụ, ndị uwe ojii enweghịkwa ike, ọ bụkwa nanị ndị na-achụ nta ego nwere ike ịzọpụta obodo ahụ n'aka mpụ siri ike. Bụrụ onye…
Egwuregwu nbudata Hades n'efu - ụdị zuru oke
Hades bụ akpa sitere na ndị okike Bastion na Transistor, nke ihe omume ya na-eme n'ụwa nke dabere na akụkọ ifo ndị Gris, ebe ị ga-agbarịrị chi ọnwụ aka. Ụbọchị mwepụta egwuregwu Hades: Nnweta mmalite Disemba 10, 2019 Ụdị: Action, Nkọwapụta Roguelike: Akwụkwọ ọhụrụ gị ọ bụla agaghị abụ otu ihe gara aga.…
Yakuza: Dị ka Dragọn na-egwu egwu egwuregwu egwuregwu zuru oke
Yakuza: Dị ka Dragọn - ụbụrụ nke ụlọ ọrụ SEGA, egwuregwu egwuregwu na-egwu egwu, na-eme ihe na-atọ ụtọ na-atụgharị agha. Isi agwa na egwuregwu ahụ bụ Yakuza dị ala - Ichiban Kasuge. Mgbe ọ nọrọ afọ 18 n'ụlọ mkpọrọ maka mpụ ọ na-emetụbeghị, Kasuge hapụrụ n'efu wee chọpụta na onye ọ bụla hụrụ n'anya…
Mmụọ nke North Free Download Full – Version
Nbudata mmụọ nke North bụ egwuregwu akụkọ indie mmadụ nke atọ nke ị ga-ahụ njem mara mma na nke na-atọ ụtọ juputara na ihe egwuregwu, egwuregwu mgbagwoju anya, ilu na ndị ọzọ… Nye onye nkwusa Studio: Jikota Egwuregwu Platform: PC, PlayStation 7 Ụdị mbipụta: Asụsụ Interface ikike: Bekee, Multi2020…
Nke a agha nke m download PC egwuregwu zuru ezu
Nbudata agha nke m n'efu - egwuregwu na isiokwu agha, ebe ị na-echeghị ọrụ onye agha nwere obi ike na-azọpụta ụwa, ebe a ị ga-esonye n'akụkụ onye bi na ya. A nọchibidoro obodo ahụ, ọchịchịrị na ọgba aghara na-achịkwa gburugburu. Naanị ebumnuche gị bụ ịlanarị site n'iji ụzọ ọ bụla.…
Survivalist: Egwuregwu nbudata efu na-adịghị ahụ anya - ụdị zuru oke
Survivalist: Ahụhụ a na-adịghị ahụ anya bụ simulator nlanarị dị mma nke ị na-aga na nnukwu mbara ụwa nke mikpuru n'ọgba aghara mgbe ọdịda nke mmepeanya na ọbịbịa nke zombies… Ụbọchị mwepụta nke Survivalist n'efu: Nweta mbido June 1, 2020 Genre: Action , Strategy, Ịlanahụ Onye Mmepụta: Bob Platform: PC Interface Language: English Voice Language: Ọ dịghị…
Ikpe na-ezighị ezi nke abụọ: Mbipụta akụkọ ifo
Ikpe na-ezighị ezi 2 bụ ihe na-aga n'ihu nke egwuregwu ọgụ A na-ekpe ikpe na-ezighị ezi: Chi dị n'etiti anyị ma na-enye ndị egwuregwu ka ha sonye n'ọgụ dị n'etiti ndị ama ama DC. Usoro akụrụngwa pụrụ iche na-enye gị ohere ịhazi nke ọ bụla Super Heroes na Super Villains, na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Onye ọrụ nwere ike ịgbanwe ọdịdị, ụdị agha, wee mee mkpebi gbasara…
Agha Ụwa Z – Goty Edition Full Version
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 11, 2022 Hapụ ikwu
Saber Interactive ụlọ ọrụ, yana studio Paramount Pictures, kpebiri ime ihe na-atọ ndị na-akwado ọgụ ọgụ na zombies ụtọ. N'oge a, ha mepụtara egwuregwu a na-akpọ Agha Ụwa Z, nke na-enye ohere ịga na ụwa zombie na-agbalị ịlanarị n'eziokwu ọjọọ nke esemokwu ahụ. Ị nwere ike ibudata Agha Ụwa Z ugbu a,…
MoviesBy Margaret Caffrey January 11, 2022 Hapụ ikwu
Disney Animation ewepụtala ụgbọala na-adọkpụ nke mbụ maka ihe nkiri animated Raya na Dragon ikpeazụ. Nhụchalụ a na-enye nhụpeta mbụ nke ihe nkiri animated ọhụrụ, nke, n'adịghị ka ihe nkiri dị ka Pixar's Soul, ka na-eme atụmatụ maka mwepụta ihe nkiri. Movierulz Raya na Dragọn Ikpeazụ ka atọrọ ka ọ bụrụ ihe nkiri sinima na Maachị 11, 2021.…
SnowRunner: Egwuregwu MudRunner zuru oke
Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 10, 2022 Hapụ ikwu
SnowRunner bụ simulator ọhụrụ dị ike yana ezi uche sitere na Focus Home Interactive, nke bụ n'ihu nke Spintires ama ama: MudRunner. Ndị na-egwu egwu ga-abanye n'eziokwu nke ọrụ dị oke egwu na oke egwu - onye na-anya ụgbọ ala buru ibu. Ụbọchị mwepụta SnowRunner: Eprel 28, 2020 Ụdị: Simulation, Ọsọ, Onye Mmepụta 3D: Saber Interactive Platform:…
Egwuregwu ọhụrụEgwuregwu PC
Age of Empires Definitive Edition: Nbudata zuru oke n'efu
Egwuregwu ọhụrụ, Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 10, 2022 Hapụ ikwu
Nkọwa egwuregwu: Anyị na-ewetara gị atụmatụ kpochapụ egwuregwu Age of Empires Definitive Edition free download full version na mbipụta ọhụrụ. Emepụtara ya iji sọpụrụ usoro nke na-eme ememe afọ 20. Egwuregwu a bụ ezigbo nrụgharị nke atụmatụ kọmputa, nke meriri obi na uche nke ọtụtụ ndị egwuregwu na…
Valorant bụ onye na-agba ụta egwuregwu asọmpi n'efu sitere na Egwuregwu Riot
Egwuregwu ọhụrụ, Egwuregwu PCBy Margaret Caffrey January 9, 2022 Hapụ ikwu
Valorant bụ egwuregwu ịgba ụta 5 ruo 5 n'efu sitere na Egwuregwu Riot (League of Legends) maka PC. Emebere mwepụta nke Egwuregwu Valorant Riot maka 2020, ndị mmepe na-ekwekwa nkwa sava efu nwere ọnụ ahịa akara 128 maka ndị egwuregwu niile yana opekata mpe 30 FPS ọbụlagodi na PC ndị toro eto. Egwuregwu Riot kwekwara nkwa…
Egwuregwu PC, Nyocha, Top GamesBy Margaret Caffrey January 9, 2022 Hapụ ikwu
Bụrụ onye ama ama nke ukwuu maka nnukwu ihe ịga nke ọma nke Fortnite na PlayerUnknown BattleGround (PUBG), ụdị nke Battle Royale abụrụla ihe dị mkpa maka ndị egwuregwu, kamakwa maka ndị na-ebipụta egwuregwu vidiyo. Site na Egwuregwu Egwuregwu Apex Legends, Eletrọnịkị Arts na-ebuga onye na-agba ụta Royale ha na Respawn Entertainment. Egwuregwu vidiyo Apex Legends na-ekwupụta ịgụta nde 25…
Ijuanya! Frozen 2 dị na Disney Plus ugbu a: gbasaa ihe nkiri ahụ n'ịntanetị ebe ọ bụla
Egwuregwu, NyochaBy Margaret Caffrey January 8, 2022 Hapụ ikwu
Ruo afọ isii, tupu ọbịbịa nke CGI remake nke The Lion King, Disney Frozen nọ n'ahịrị nke mbụ n'ọkwa nke ihe nkiri animated kachasị mma. Ọ bụ ihe ịtụnanya na Disney chere ogologo oge tupu ịmalite ọrụ na nsonazụ. Obi abụọ adịghị ya, Frozen 2 ọhụrụ dị na Disney Plus ugbu a ga-anakọta na…
3MOVIERULZ 2020 - Weebụsaịtị na-ebipụta njikọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị
MoviesBy Margaret Caffrey January 8, 2022 Hapụ ikwu
Dị ka anyị niile maara, mgbe onye na-emepụta ihe na-etinye ego ọtụtụ nde mmadụ n'ime ihe nkiri ya na-eme mkpọtụ, ọ na-atụ anya na ọ ga-enwe nnukwu ihe ịga nke ọma na nnukwu uru n'ihi ya. Ihe niile dabere na mgbe ewepụtara ihe nkiri ahụ na ụlọ ihe nkiri na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-ege ntị na-abịa ile ya. Mana enwere…